Muhiimadda naqshadeynta warsidaha | Abuurista khadka tooska ah
Muhiimadda naqshadeynta warsidaha
Jorge Neira | | Sawirro
Doorka warsidaha ayaa muhiim u ah Soo jiidasho runti ku saabsan waxa soo ifbaxay maalmihii la soo dhaafay ama si ay u ogaadaan astaantaada. Kaliya maahan in e-maylku sheegto inuu leeyahay marin ka ballaaran kanaalada warbaahinta bulshada, sidoo kale waa nidaam si ballaaran loo isticmaalo oo lagu kalsoonaan karo.
Khaladka ugu badan ee lagu arko suuq geynta emailka ayaa ah adeegsiga sawirro waaweynMaaddaama sawirrada waaweyn ay qaadanayaan waqti dheer in la soo raro, tani waa mid jahwareer ku ah adeegsadaha, xitaa waxay dhaawacdaa aragtidooda ku aaddan xiriirka. Hubso inaad isticmaasho qalabka sida TinyPNG si aad u cadaadinaysid sawiradaada oo aadan u isticmaalin sawirada leh cabirro waaweyn si aad u bilawdid inaad sumadda si joogto ah u haysato.
1 Sidee loo abuuraa naqshad soo jiidasho leh?
2 Abuur khariidad macquul ah
3 Xiriirintaasi waa inay noqotaa mid si fudud oo fudud loo heli karo.
Sidee loo abuuraa naqshad soo jiidasho leh?
Haddii naqshadeynta loogu talagalay mashruuc adiga kuu gaar ah ama macmiil, a cadeyn shirkadeed (CI), Hubso inaad haysatid.
Tusaale ahaan, haddii ganacsi si fiican u dhisan uu leeyahay astaan, xaraf, ama midab, waa muhiim in loo hoggaansamo nidaamkaas. Kaliya ma xoojin doontid wax ku duugi doona maskaxda akhristaha, laakiin sidoo kale warsidaha ayaa soo gudbin doona xirfad iyo kartida dhinaca naqshadeeyaha.
Tani waxay u oggolaaneysaa qolka ku ciyaar naqshad iyo fariin, inkasta oo ay tahay inaad sidoo kale tixgeliso taariikhaha lagu soo diri doono joornaalkaaga, tusaale ahaan, haddii la sameeyo inta lagu jiro usbuuca, inta isticmaaleyaashu shaqada ku jiraan ama haddii lagu sameeyo ciidaha, maadaama ay suurtogal tahay in dadku ma jiri doono emaylkaaga, markaa in kasta oo naqshadda noocan ah aaladda shaqada ay muhiim tahay, haddana waxyaabo kale oo badan ayaa sidoo kale saameyn ku leh.
Abuur khariidad macquul ah
Wargeysyada leh naqshad jahwareer ama soo jiidasho leh waxay noqon karaan masiibo. Way adag yihiin in la akhriyo taasna waxay ka dhigan tahay inay adag tahay in la riixo, waxay yareyneysaa taraafikada macaamiisha riixeysa, waxayna ololaha ka dhigaysaa mid aan waxtar u lahayn guud ahaan.
Naqshad wanaagsan waa inay noqotaa toosin waayo-aragnimo akhris wacan iyo rabitaan ah inaan waxbadan ogaado.
Siempre hubso in nashqaddaadu ka jawaabeyso oo ay si nadiif ah u socoto on tirada shaashadda kala duwan, laga bilaabo moobilka ilaa miisaska, maxaa yeelay qoraalka waa inuu had iyo jeer fududahay in la akhriyo, marka isticmaalka midabka asalka ah oo dhameystiraya midabka qoraalka, wuxuu hubiyaa kala duwanaansho ku filan si loo hubiyo sharcinimada, sidaas awgeedna looga fogaado baakadaha qoraalka ee cufan
Hubso inaad dooratay font la aqrin karo lana heli karo, hubi inaad sidoo kale dejisay wicitaanka qeybaha waxqabadka marka lagu daro qoraalkaaga caadiga ah, kuwan waa inuu soo jiito indhaha akhristayaashaada.
Tani waa meesha ugufiican ee loo isticmaalo badhan ama sawir laxiriira si loo xoojiyo sheyga maskaxda akhristaha. Ugu dambeyntiina, haddii aad sheegto cabbirka pixel-ka, waad yareyn kartaa ballaca ugu sarreeya ee joornaalkaaga 650 pixels. Taasi waa barta goosashada ee aqristayaasha emaylka badankood iyo sawir ka sarreeya tan waxay ku dambayn doontaa warside la jarjaray.
Wargeys kastaa waxaa loo diraa qaataha inuu wax sameeyo, sida inuu sameeyo iib cusub, hubi wararka ugu dambeeya, soo dejiso nooca cusub ee dalabkaaga, ugu deeqo sabab macquul ah ama u iibsato tikidhada bandhigga weyn ee soo socda, joornaalada ayaa jira si dadka loogu jiheeyo inay wax qabtaan.
Xaaladaha badankood, wicitaankan ficilku wuxuu qaataa qaab xiriiriye oo ay tahay inuu akhristaha gujiyo.
Xiriirintaasi waa inay noqotaa mid si fudud oo fudud loo heli karo.
Waa inay noqotaa muuqaal ahaan iyo mawduuc ahaanba caan ku ah naqshadeynta joornaalkaaga, oo leh qoraal ballaadhan, badhan midab leh, sawir la xidhiidha, ama wax muuqaal ahaan soo jiidasho leh.
Nafteeda, waa inay isla markiiba u muuqataa akhristaha sababta ay u heleen fariintaada, waxa aad rabto inaad sameyso, iyo sababta ay u sameynayaan, sidaa darteed macluumaadka waa in la abaabulaa kala sarrayn cad oo muuqata, iyadoo la adeegsanayo qoraal iyo sawirro si loo abaabulo sheekadaada loona caddeeyo ujeedooyinkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » Muhiimadda naqshadeynta warsidaha
5 aaladda naqshadeynta garaafka oo leh muuqaal muuqaal weyn leh
Muhiimadda calaamadeynta mashruuc garaaf ah